Soo dejisan DVDFab 11.0.8.2 – Vessoft
WindowsCD & DVD & USB gaariCD & DVD-ga ripperDVDFab
Qeybta: CD & DVD-ga ripper
Bogga rasmiga ah: DVDFab
DVDFab – software ah in ay la shaqeeyaan DVD Blu-ray iyo cajalladaha. Software waxa ka mid ah qalab loo qeebiyo, partitioning, riixo oo ay ka saareen of ilaalinta nuqul ah. DVDFab u saamaxaaya in ay badalo video qaabab sida MP4, AVI, wmv, MKV iyo qaabab qalabka la qaadi karo. Software ayaa sidoo kale wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si ay u abuuraan DVD Blu-ray iyo cajalladaha la kuwan raadkaygay audio customizable ama subtitles iyo badbaadin mashruuc qaab ISO.
Kakan ee qalabka si ay ula DVD Blu-ray iyo cajalladaha shaqeeyaan
Kuweeda videos in qaabab loo jecel yahay
Kartida aad u badbaadin mashruuc qaab ISO
Soo dejisan DVDFab
DVDFab Passkey – softiweer waxaa loogu talagalay inay nuqul ka sameysato DVD-ga iyo Blu-ray, oo meesha ka saari kara ilaalinta gobolka ee disk-ga oo dib ugu soo celinaysa ciyaartoy kala duwan, iyadoon loo eegeynin xiisaha gobol gaar ah.
Faallo ku saabsan DVDFab
DVDFab Xirfadaha la xiriira
DVD Decrypter – waa aalad ku habboon in lala shaqeeyo DVD-yada. Softiweerku wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ka booddo ilaalinta DVD-yada isla markaana aad nuqul ka sameysato waxyaabaha ku jira galka faylasha ama sawirrada ISO.
software waxaa loogu talagalay si loogu badalo DVDs galay qaabab video caan ah, DVDs gurmad siyaabo kala duwan oo garab ilaalinta cajaladaha ka dhanka ah koobiyeynta.
ImgBurn – qalab ku habboon oo lagula shaqeyn karo sawirrada diskiga. Software-ka wuxuu taageeraa qaababka sawirka caanka ah wuxuuna kuu ogolaanayaa inaad abuurto sawirrada ama aad ugu gubto disc.
Cinema Media Player Classic Home Cinema – media player caan ah iyada oo la adeegsanaayo meela kala duwan oo loogu talagalay dib ugu soo laabashada file tayo sare leh. Sidoo kale softiweerku wuxuu awood u siinayaa inuu daawado faylalka aan si buuxda u raran ama musuqmaasuq lahayn.